Fitsidihan'ny Praiminisitra ny distrikan'Isandra | Primature
Fitsidihan’ny Praiminisitra ny distrikan’Isandra
13 mai 2021 16 octobre 2021
Mahazoarivo, ny 13 mey 2021 – Natomboka tao amin’ny kaominina Mahazoarivo sy ny kaominina Soatanana androany, izay samy ao amin’ny distrikan’Isandra, ny hetsika mahakasika ny “Asa Avotra Mirindra” (AAM) ka tonga nanome voninahitra ny lanonana mifandraika amin’izany ny delegasionim-panjakana notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Fiahiana ara-tsosialy amin’ny alalan’ny fanomezana asa maivana hampiakarana ny vola miditra sy ny fahaiza-manaon’ireo mponina eny ifotony, izay vatsian’ny fitondram-panjakana tanteraka, ny AAM; ary toromarika avy amin’ny Filohan’ny Repoblika no nanatanterahana azy tamin’ny alalan’ny FID, ho fitsinjovana ny vahoaka amin’ny Faritra rehetra manerana an’i Madagasikara manoloana ny fiantraikan’ireo fepetra noraisina nandritra ny hamehana ara-pahasalamana. Ho an’ny kaominina Soatanana sy Mahazoarivo manokana dia tokan-trano miisa 2000 eo ho eo, izay mizara amina fokontany 14, no heverina fa hisitraka ny AAM.
Naneho ny hafaliany tamin’ny fahatongavany tao amin’ny kaominina Mahazoarivo ny Praiminisitra raha nampahatsiahy ny fandalovany tamin’ny volana desambra 2020: “ny fiverenana an-doharano dia fanehoantsika ny soa toavina maha-Malagasy, ny fifankatiavana, ny firaisankina ary ny fifampitsinjovana”, hoy izy. Nambarany fa fototra tamin’ny nampisehoana ny maha-iray ny Malagasy rehetra tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony izany ka tokony tsy hisy ny fifamonoana fa hampanjakaina kosa ny fandriampahalemana sy ny filaminana.
Nampanantena ny Praiminisitra, tamin’ny fandalovany teo aloha, fa rehefa misy ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny mpitandro ny filaminana dia misokatra ny lalana mankany amin’ny fandrosoana, ka tsy maintsy misy ny fiahiana ataon’ny fanjakana amin’ny vahoaka, dia ny famerenana ny filaminana sy fandriampahalemana arahina fanomezana fotodrafitrasa, ary indrindra fanampiana. Teo no nampahafantariny fa isan’ny antony niverenany nitsidika ny distrikan’Isandra ny fankasitrahana feno ny vahoaka sy ny tompon’andraikitra rehetra tsy ankanavaka teo ambany fitarihan’ny governoram-paritra tany an-toerana, tamin’ny nifanomezan’izy ireo tanana tamin’ny Filohan’ny Repoblika ny amin’ny fiaraha-mientana amin’ireo mpitandro ny filaminana sy ny fitondràna ny anjara birikin’izy ireo hamerenana an’izany fandriampahalemana izany, izay tsapa ankehitriny fa efa miseho tsikelikely. “Tsy misy mahatohitra ny hery sy ny fanahy raha mahay mifanome tanana, ka reharehanareo ato anatin’ny disitrika, ny Faritra, ary ny Faritanin’i Fianarantsoa izany” hoy ihany ny tenany.
Notsiahivin’ny Praiminisitra fa vaindohan-draharaha amin’ny praograman’asan’ny fanjakana hatrizay ny resaka fandriampahalemana, ka fotoana hamerenana ny fandinihana ny mahakasika an’izany ankehitriny, ary ametrahana lamin’asa ampiharina eny ifotony, eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, mba hisian’ny borigady isaky ny kaominina, sy ny kaompania isaky ny distrika, izay drafitra napetraka hanatonan’ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka. Toy izany koa ny hametrahana toby miaramila ao anatin’ny Faritra, indrindra amin’ireo distrika tena anjakan’ny tsy fandriampahalemana. Ambonin’izay dia efa miroso amin’ny fametrahana “commissariat de police” tsikelikely amina toerana maro eto amin’ny firenena ny fanjakana, ka isan’ny hisitraka an’izany ny Faritra Matsiatra Ambony. Izany rehetra izany moa, hoy ihany ny Praiminisitra, dia tafiditra ao anatin’ny tetik’ady iraisan’ireo mpitandro ny filaminana, ary tanterahina miaraka amin’ireo tompon’andraikitra rehetra amin’ny lafin-tany sy ny governoram-paritra, mba hahafahana mandrindra ny fampandrosoana; fampandrosoana izay tena andrandrain’ny vahoaka.
Nararaotin’ny Praiminisitra ny fifampiresahana tamin’ny vahoakan’i Mahazoarivo, nilazàny fa tsy ho ela dia hatomboka ao ny fananganana fotodrafitrasa ho an’ny “maison des jeunes” sy ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena, hamolavolana an’ireo tanora. Hohatsaraina ihany koa ny sekoly any an-toerana.
Teo am-pamaranana dia nanantitrantitra ny Praiminisitra fa rehefa mipetraka araka ny tokony ho izy ny hasin’ny vahoaka sy ny hasin’ny fahefam-panjakana dia milamina ny fampandrosoana ary azo tanterahina ao anatin’ny fotoana fohy izany.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 12 mai 2021
Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo Asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana – 8 jona 2021 →
Fizarana vatsy tsinjo tao Toamasina